၁၂-၀၃-၂၀၁၈ မှ ၂၄-၀၄-၂၀၁၈ ထိ
Tulip Family Spa and Health Club ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ
&phone;: 0943097599 , 09966881956
Facebook Page : https://www.facebook.com/tulipfamilyspa
Tulip Family Spa and Health Club ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ Tulip Family Spa and Health Club မှ ဖြစ်ပါတယ်။
Tulip Family Spa and Health Club မှ ၀န်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုနိုင်မည့် ၇၀၀၀၀ကျပ် ကူပွန်အား ကံထူးရှင်(၂)ယောက်အတွက် မဲဖောက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေး ဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Tulip Family Spa and Health Club မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။ Tulip Family Spa and Health Club တွင်ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုများအား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
❀ မင်္ဂလာပါ ❀
ပျိုမေတို့ရေ...ခုလိုဆောင်းရာသီကြီးမှာ အသားအရေ တွေကခြောက်သွေ့ ပျက်စီးပြီး မလှမပဖြစ် နေလို့စိတ်ညစ်နေရပါသလား?
ဒါမှမဟုတ် တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ညောင်းညာကိုက်ခဲတာတွေကြောင့် လူလဲအိုမင်းရင့်ရော်လာသလိုခံစားနေရပါသလား?
မပူပါနဲ့ လုံးဝကို သဘာဝပစ္စည်(Organic )စစ်စစ်တွေကိုဘဲ အသုံးပြုပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ ရတနာလမ်းမပေါ် မလိခ လုံးချင်းအိမ်ရာ ဝန်းအနီးမှာရှိတဲ့Tulip SPA & HealthClub လေး ကို လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..
ဒီ SPA လေးရဲ့ အဓိက အားသာချက်နဲ့ ကိုယ်တွေ အကြိုက်ဆုံးအချက်က ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိတဲ့ သဘာဝကရတဲ့ Organc ပစ္စည်းတွေကိုဘဲ အသုံးပြုထားတာပါ။ သဘာဝပစ္စည်း တွေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ အထဲကမှ လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး တွေထဲက Organic body treatmentတွေဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီ၊ ဆနွင်း၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့၊ကင်ပွန်းသီး၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်၊ ရွှံ့ စေး ၊ နှင်းဆီ ၊မကျီးသီး စတဲ့ သဘာဝ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လုပ်ပေးတာမို့ အမျိုးသမီးများအတွက် အသားအရေ သာမက ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထူး ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ဒီ treatmentဟာ အချိန် ၂နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့် ကြာမှာဖြစ်ပြီး သစ်သီးများ ကရတဲ့ အက်စစ် ဓါတ် နှင့် vitamin C တို့ကို အသုံးပြုကာ အရေ ပြား ပေါ်က ဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားပြီး အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေမယ့် treatment တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ SPA မှာက Facial Form ကအစ Organic ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတာဆိုတော့ Amazing….ပါဗျာ..။ Scrub လုပ်ပြီး သန့် စင်သွားသော အရေပြားပေါ်တွင် အသားရေကို ပိုမိုကောင်းမွန် စေမည့် Organic oil များဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် အဆုံးမဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု နှင့်လန်းဆန်း ကြည်လင်မှုကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ SPA လေးမှာ ငါးလေးတွေနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးတဲ့ Dr.Fish ဝန်ဆောင်မှုလဲ ရသေးတယ်နော် တော်တော်မိုက်တယ် နောက်ပြီး ဆိုင်ကိုလာဖို့ အခက်ခဲရှိသူတွေ အတွက်လဲ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုလဲ ပေးပါတယ်နော် သူကတော့ အမျိုးသမီး သီးသန့်အတွက်ပါနော်။
သတိပြုရမည့် အချက်ကတော့ Tulip SPA ကိုသွားမည်ဆိုရင် ကြိုတင် Booking လေးတော့ လုပ်ဖို့လိုတယ်နော် ဘာကြောင့်ဆို သူက သဘာဝသစ်ဥ သစ်ဖု ပန်းမန်လေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ပေးရတာ ဆိုတော့ ကြိုတင်လုပ်ထား ရတာလေးတွေ ရှိနေလို့ပါ။ ဒီ SPA လေးမှာ ခေါင်းအစခြေအဆုံး အလှအပရေးရာ အတွက်ရော အသားအရေ ထိန်းသိမ်းအဖို့ အတွက်ရော အညောင်းအညာပါ ပြေစေဖို့အတွက်ပါ Organic တွေဘဲအဓိက အသုံးပြုပြီး အကုန်အစုံသော ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အနဲဆုံး 4500 ကျပ်ကနေစပြီး ပြုလုပ်လို့ရတယ်နော်။ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း မဆိုးဘူး တော်တော်လေး မိုက်တယ်နော်။
❀ Tulip Family Spa and Health Club တွင် ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ❀
Body Spa & Scrub
Hot Stone Oil Spa
❀ မေးကြတဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုလေး အကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော် ❀
ယနေ့ ခေတ်လို တစ်နေရာသွားဖို့ ကားလမ်း အခက်အခဲတွေ ကြောင့် ဆိုင်သွားဖို့ ဝန်လေးနေလား? များပြားလှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေ ကြောင့် သီးသန့် အချိန်ပေးပြီး ဆိုင်မလာချင်ဖူးလား? သွေးနုသားနုမို့ အပြင်ထွက်ဖို့ မလွယ်ကူသေးတဲ့ မိခင်တွေ ရေမချိုးရ ချွေးမစုံလို့စိတ်ညစ်နေလား? ဒါတွေ အားလုံးအတွက် သိပ်ကို အဆင်ပြေပြီး အလုပ်အကိုင် မပျက်ပဲ လှပ သက်သာစေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုလေးပါနော်
Home Service မှာ ဘာတွေ ရနိုင်လည်းဆိုရင်
ချွေးပေါင်းထုတ်ခြင်း (လိမ်းဆေး ရှူဆေး ပေါင်းဆေးအပါ)
Hand& Foot Cleaning
မျက်တောင်ကောက်ခြင်း စတာတွေ ရပါတယ်
အလုပ်ချိန်မအားလပ်လို့ဆိုင်လာရန် အခက်အခဲရှိသူ တွေ မီးဖွားပြီးကာစ မိခင်တွေ အသက်အရွယ် ကြီးလို့ ဆိုင်လာရန် အခက်အခဲရှိသူတွေ ကလေးငယ်လေးတွေရှိလို့ ဆိုင်သွားလုပ်ရမှာ အခက်အခဲကြုံနေသူ ပျိုပျို အိုအို မမလှလှ အန်တီ အဖွား အားလုံးအတွက် သိပ်ကို စိတ်ချမ်းသာစေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုလေးပါ
**လာရောက်ဝန်ဆောင်ခ သီးခြားထပ်ပေးရန်မလိုပါ**ပုံမှတ် သတ်မှတ်ဈေးအတိုင်းသာ ပေးဆောင်ရပါသည် ဆိုင်ရှိ Discount များအား ခံစားခွင့်မရှိပါ သော်လည်း ဝန်ဆောင်ခေါ်ဆိုမှု ၁၀ကြိမ် ပြည့်ပါ ၁ကြိမ် Free ပါနော်
( အမျိုးသမီး သီးသန့် ပါ )
❀ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ် တီထွင်ထားတဲ့ ကြတ်ထုတ် ကုသနည်း ❀
ခုလိုရာသီမျိုးမှာ ကိုယ်ခန္ဓာညောင်းညာလေးလံ ထိုင်းမှိုင်းပြီး စိတ်ပင်ပန်းလန်းဆန်းမှု မရှိသလို ခံစားနေရတဲ့ ချစ်သော မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ် ကာစတန်မာများ အတွက် သတင်းကောင်းလေး ပြောပြမယ်နော်
Herbal Ball Treatment ထိုင်း အိန္ဒိယ ရိုးရာတွေရဲ့ ကြတ်ထုတ် ကုသနည်းကို အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ် တီထွင်ထားတဲ့ ကုသနည်းလေးပါရှင်
ဘာတွေပါဝင်မလည်း ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ကောင်းမွန်လိုအပ်တဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုရစေရန် Essential Oil လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ခြင်း
ကိုယ်တွင်း အနွေးဓာတ်ရရန် ဆေးပေါင်းဖိုဖြင့် ပေါင်းခြင်း
ဘယ်ကိုဖုန်းဆက် booking ယူရမလည်း👉0943097599/09966881956
❀ Peel & Wax Treatment by Tulip Family Spa ❀
ခြေထောက်၊ လက်တွေ ညိုမည်းပြီး ကြည့်ရဆိုးနေသူတွေ လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံး Treatment လေးပါ။
ဒီ Treatment လေးက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မတူညီတဲ့ အပူချိန်ကို ထိန်းပေးတယ်။ ရေဓာတ် ဖြည့်ပေးတဲ့ အတွင် အသားအရေ စိုပြေစေတယ်။ အသားဖြူစေတယ်။ အရေပြားကို ပြောင်လက် တောက်ပ စေတယ်။ ဆဲလ် အသေတွေကို ဖယ်ရှား ပေးပါတယ်။ အသားအရေကို ချောမွေ့ပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေပါတယ်။
❀ မေးနေကြတဲ့ ဖယောင်းပေါင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေက ❀
ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ အရင်ဆုံး ဂျီးချွတ်ပါမယ် (ရေနွေး နွေးထဲတွင် အသားရေအတွက် သင့်လျော်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖြည့်စွက် ထားပါသည်)
မိနစ်၂၀ ခန့် လောက်စိမ်ထားပြီးရင် သန့် စင်ပြီးသား အသားရေပေါ်ကို စိမ့်ဝင်စေမယ့် အဆီဖြင့် လိမ်းပြီး နူးညံ့သန့် ရှင်းမှုအတွက် ပြုလုပ်ပါသည်
အသားထဲစိမ့်ဝင်ပြီး အာဟာရဖြည့်တင်းပြီးတဲ့ အရေပြားပေါ်ကို ဖယောင်းပျော့ Peeling ရည် လိမ်းပြီး မိနစ်၃၀ခန့် ထားပါသည်
ဖယောင်းပျော့လေးတွေ အရေပြားဆဲလ်လေးတွေကို ပြုပြင်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ထိန်းညှိပြီးတဲ့ အခါဖယ်ရှားပေးပြီး အရေပြားစိုပြေစေမယ့် အစိုဓာတ်ထိန်း နို့ ရည်လိမ်းပါသည်
ဒီ Peeling လေးကို တစ်လတစ်ကြိမ်လောက် ပုံမှန်လုပ်ခြင်းဖြင့် အသားရေ မညီညာခြင်း အသားရေ ကွက်ခြင်း မဲခြင်း အသားကြမ်းတမ်းအက်ကွဲခြင်း အသားရောင်မှိန်ဖျော့ခြင်း ဘေးမှကင်းဝေးပြီး လှပစိုပြေ နုနယ်တဲ့ အသားရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေပါတယ် အဲ့ဒီ Peeling ဝန်ဆောင်မှု လေးရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးအတွက် 38000 ကျပ် ဖြစ်ပြီး ခြေလက် အတွက်ပဲဆိုရင် 28000 ကျပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
❀ Foot massage ❀
Foot massage ကို ၁နာရီ ၇၀၀၀ ဆိုတော့ တစ်မျိုးတည်းလည်း တန်တယ် Facial ပါထည့်ပြီးလုပ်ရင်လည်း နှစ်ခုပေါင်းမှ 14500 မို့ နှစ်မျိုးလုံးလုပ်လည်း တန်တယ်နော် 0943097599/ 09966881956 ကို Booking လေးကြိုလုပ်ပေးဦးနော်